မိန်းကလေးများ အထူးသတိထားကြပါ YBS ပေါ်မှာဖင်ခွဲခံလိုက်ရတာတဲ့ (Video) - CeleLove
မိန်းကလေးများ အထူးသတိထားကြပါ YBS ပေါ်မှာဖင်ခွဲခံလိုက်ရတာတဲ့ (Video)
July 10, 2019 Cele Love ပြည်တွင်းသတင်း 0
YBS 14 ပေါ်မှာ ဖင်ခွဲ ခံလိုက်ရတဲ့ ကောင်မလေး ရုပ်သံ
ဒီနေ့ ညီမ YBS (14) ပေါ်မှာ ဘောင်းဘီ ဖင်ခွဲ ခံလိုက် ရပါတယ် (ဖင်နေရာပဲ ရွေးခွဲ ခံရတာမို့ ဖင်ခွဲတယ်လို့ပဲ ရေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်…။)
ဘောင်းဘီ အရှည် ၀တ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ရုံး Uniform Sport Shirt ကို Jean ဘောင်းဘီရှည်ထဲ ထည့်ဝတ် တာ ဖြစ်ပါတယ် …။
ကြားဖူး မြင်ဖူး နေတာမို့ သတိနဲ့စီး သတိနဲ့ သွားပေမဲ့ ကိုယ်တွေ့ကြုံမှ ခံပြင်းသိနဲ့ သိပါတော့တယ် ။ ရုံးအပြန်ဆို Ferry စီးနေကျ ပေမဲ့…. ရုံးအသွားဆို ထမင်းချိုင့်မမီမှားစိုးပြီး Ferry မစီးပဲ YBS (14) ကို 8 နာရီလောက်ဆို စီးလေ့ ရှိပါတယ် …။
အစ်မတွေ ညီမတွေ အားလုံးကို ပို၍ ပို၍ သတိထားစေ ချင်လို့ ညီမ အရှက် အကွဲခံပြီး Sharing လုပ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် …. ညီမလိုမျိုး ဘောင်းဘီအခွဲ ခံရတာ ညီမတို့ ရုံးမှာ ညီမ အပါအ၀င် နဲ့ဆို လေးယောက်မြောက် ဖြစ်ပါတယ် …။
ညီမ ရုံးက အစ်မ သုံးယောက်လဲ ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့် အခွဲခံရတာ အစ်မ တယောက်ဆို အထဲက အတွင်းခံ ဘောင်းဘီထိ ပြဲပါတယ် (အသားမထိသွားတာပဲ တော်လှပြီ ပြောရမဲ့ ပုံပါ)
ဒီနေရာမှာ ညီမ ပြောချင်တာက ကိုယ့်အနားမှာ ကပ်စီးတဲ့ ယောက်ျားမှန်သမျှ ငယ်ငယ် ကြီးကြီး သတိထား ပါလို့ပဲ ပြောပါရစေနော် ….။
ညီမ မနက် ရုံးသွားလို့ YBS (14) စီးတိုင်း ခါးပိုက်နှိုက် နှိုက်သွားလို့ ဆိုပြီး ပြောကြ မြင်ရတာရယ် ၊ ဆံပင်အရှည်ကြီးကို အနောက်ကနေ ဖြတ်သွားလို့ဆိုပြီး ပြောကြ မြင်ရတာရယ် မနည်းပါဘူး …။
နှိုက်တဲ့လူ ၊ ဖြတ်တဲ့လူ လို့ သတိထားလိုက် မိတဲ့ အချိန်တိုင်း မမိလိုက်ပဲ ဆင်းပြေးသွားတာ မနည်း ပါဘူး….. ကြားဖူး သိဖူးနေတာ ရယ်ကြောင့် မလွှဲသာလို့ YBS (14) စီးနေရပေမဲ့ ကားလာတိုင်း တက်ခါနီးတိုင်း ညီမ လိုရမယ်ရ ကားနံပါတ်ကြည့်ပြီး မှတ်ပြီး တတ်စီးလေ့ ရှိပါတယ် …။
ကံဆိုးချင်တော့ ဒီနေ့ ကားနံပါတ်လဲ မမှတ်မိပဲ မိနစ် အနည်းငယ်နောက် ကျနေတယ် ဆိုပြီး အနောက်ပေါက် ကနေပဲ တက်စီးပါတယ် …။
(ဘာမှတော့ လုပ်လို့ရမယ် မထင်ပေမဲ့ CCTV ကို သွားကြည့်ချင် ရင်တောင် ကားနံပါတ် မမှတ်မိတော့ ဆိုးတာပေါ့) ဖြစ်ချင်တော့ ဘယ်တုန်းကမှ ထည့်လေ့ ထည့်ထ မရှိတဲ့ မှတ်ပုံတင်ရယ် ATM Card တွေရယ် Bank စာအုပ်တွေရယ် ထည့်လာပါတယ် …။(5ရက်နေ့မှ လခထုတ် ထာမို့ တခါထဲ ထုတ်ဖို့ ယူ လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်)
ညီမ ပိုက်ဆံအိတ်က အလယ်အလတ် ဆိုဒ်မို့ စလွယ် လွယ်လေ့ ရှိတာကြောင့် ရှေ့ပို့ထားပြီး လက်တစ်ဖက်က ဖိကိုင်ထား ပါတယ် နောက်တစ်ဖက်က တန်းကို ကိုင်ထားပါတယ်၊ ဆံပင်ကလဲ ခါးကျော် အရှည်ကြီးကို စီးထားပြီး ဂျိုင်းကြားနဲ့ ညှပ်ပြီး ရှေ့ပို့ထား ပါတယ်….. ထမင်းချိုင့်နဲ့ ထီးကတော့ ညီမရပ်နေတဲ့ ခုံနားက ကလေးမလေး တစ်ယောက် ကိုင်ပေးထား ပါတယ် …။
ကားက အရမ်း အကြပ်ကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ မကြပ်တစ်ကြပ် အနေအထား မျိုးပါ ညီမ အနားမှာ သတိထားကြည့်နေသမျှ ယောက်ျား ကြီးငယ် ရပ်စီးနေတာ သတိထားမိ ပါတယ် …။
ပိုပြီး သတိထားမိ တာကတော့ ကျောက်ကုန်း အကျော်လောက်မှာ ကားပေါ်တက်လာတဲ့ မိန်းမက ခပ်၀၀ ညီမ ညာဘက်ဘေးမှာ ရပ်ပါတယ် သူ့ယောက်ျား ကတော့ အသားညိုညို မျက်မှန်နဲ့ အရပ်မနိမ့်မမြင့် အသက် ၄၀ စွန်းစွန်းလောက် ရှိနိုင်ပါတယ် ညီမခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အတင်းကပ်ပြီး အနောက်တည့်တည့်မှာ လာရပ်ပါတယ် …။
အသက်ကြီးပြီး မထင်ရလောက်တဲ့ လူကြီးက အတင်းတွေ ကြပ်သယောင်နဲ့ တိုးနေပြီး ညီမ တင်ပါးနားကို ကပ်ပြီး မထိတတိ လာလုပ်နေသလို ဖြစ်မိတာကြောင့် ရိပ်မိမိခြင်း အောက်ငုံ့ ကြည့်တဲ့ အခါ ညီမ ခြေထောက်နောက်မှာ သူ့ခြေထောက်မို့ တက်နင်းပြီး ဘယ်ဘက်အတင်း တိုးထွက် ပါတယ် (ဒီချိန်ထိ မထိတတိ လာလုပ်နေတာ ကလွဲရင် ဘောင်းဘီ ဖင်ခွဲခံရမှန်း ညီမ မသိသေးပါဘူး)
ညီမဆင်းရမဲ့ တစ်မှတ်တိုင် အလိုမှာ ညီမ ဆင်းတဲ့အပေါက်ဝနားကို ထမင်းချိုင့်တွေကော ထီးတွေကော အ့လူကြီးကို အတင်း ကျော်ယူပြီး အမြန် ဆင်းပါတယ် …။(ဆင်းတဲ့အထိ သေချင်းဇိုးကြီးက ညီမလှည့်အကြည့်အထိ ညီမကို မျက်စိ တစ်ဆုံး လိုက်ကြည့်ပါတယ်)
ရုံးရောက်တဲ့ အခါမှပဲ ရုံးက ညီမလေးတွေ အစ်မတွေ ပြောတော့မှ “ဟယ် အနောက်မှာ ဘောင်းဘီက ပြဲနေတာလား? ၊ အခွဲ ခံလိုက်ရပြီလား?” ဆိုပြီး ၀ိုင်းကြည့်တော့မှ အခွဲပါ ခံလိုက်ရမှန်း သိပါတော့တယ် …။
ဒါတောင် ဆင်းရတဲ့ မှတ်တိုင်နဲ့ ရုံးနဲ့က မလှမ်းမကမ်းလေးမို့…. နို့မို့ဆို ကိုယ်မသိတော့ အခြားသူတွေ မြင်ရင် တော်တော် ရှက်စရာကြီးရယ် …။
ညီမ သူငယ်ချင်းကို ညီမ အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြတော့ ညီမသူငယ်ချင်းက အ့လူကြီးနဲ့ အ့မိန်းမ ပုံစံကို ညီမ မပြောရသေးခင်
” သူတို့ပုံစံကို ငါပြောပြမယ် လင်မယား နှစ်ယောက်လား ဘာလား ထင်ရတဲ့ ယောက်ျားက အသားညိုညို အရပ်မနိမ့်မမြင့် မျက်မှန်နဲ့ ၊ မိန်းမက ခပ်၀၀ ” ညီမ ကြုံလာတဲ့ ထိုသူနှစ်ယောက်နဲ့ ကွက်တိပါပဲ YBS (14)မှာ သူဖြစ်မလာခဲ့ ပေမဲ့ သတိထားမိနေတာ တွေ့တာ နှစ်ခါ သုံးခါ ရှိပါပြီတဲ့ ထိုလူကြီးက မသင်္ကာစရာ မိန်းကလေးတွေ ကိုပဲ သတိထားပြီး အတင်း တွေကြည့်ပါတယ် တဲ့လေ …။
ဒါဆိုရင်တော့ ခါးပိုက်နှိုက်လို့ ရရင်နှိုက် ၊ နှိုက်လို့မရရင် ဟိုလို မထိတစ်ထိတွေ လိုက်လုပ် ၊ မရတဲ့အဆုံး ဘောင်းဘီ ခွဲတယ်ပဲ ယူဆရ လောက်ပါတယ် …။
ဒါကြောင့်မို့ ညီမလို ညီမတို့ရုံးက အစ်မတွေလို ထပ်ဖြစ်မှာ ထပ်ကြုံမှာ မလိုလားလို့ ပို၍ ပို၍ သတိထားစေချင် ပါတယ် …။
ထိုလူကြီးကိုလဲ ကိုယ်ပြုသမျှတွေရဲ့ အကျိုးဆက်ကို ဘ၀ဆက်တိုင်း ဘ၀ဆက်တိုင်း ခံစားရပါစေလို့ ကျိန်ဆိုရင်း ……🙏
Love အတိုအစလေးများ , source Gue FB
မိနျးကလေးမြား အထူးသတိထားကွပါ YBS ပျေါမှာဖငျခှဲခံလိုကျရတာတဲ့ (Video)
YBS 14 ပျေါမှာ ဖငျခှဲ ခံလိုကျရတဲ့ ကောငျမလေး ရုပျသံ
ဒီနေ့ ညီမ YBS (14) ပျေါမှာ ဘောငျးဘီ ဖငျခှဲ ခံလိုကျ ရပါတယျ (ဖငျနရောပဲ ရှေးခှဲ ခံရတာမို့ ဖငျခှဲတယျလို့ပဲ ရေးခွငျး ဖွဈပါတယျ…။)
ဘောငျးဘီ အရှညျ ဝတျထားခွငျး ဖွဈပွီး ရုံး Uniform Sport Shirt ကို Jean ဘောငျးဘီရှညျထဲ ထညျ့ဝတျ တာ ဖွဈပါတယျ …။
ကွားဖူး မွငျဖူး နတောမို့ သတိနဲ့စီး သတိနဲ့ သှားပမေဲ့ ကိုယျတှကွေုံ့မှ ခံပွငျးသိနဲ့ သိပါတော့တယျ ။ ရုံးအပွနျဆို Ferry စီးနကြေ ပမေဲ့…. ရုံးအသှားဆို ထမငျးခြိုငျ့မမီမှားစိုးပွီး Ferry မစီးပဲ YBS (14) ကို 8 နာရီလောကျဆို စီးလေ့ ရှိပါတယျ …။
အဈမတှေ ညီမတှေ အားလုံးကို ပို၍ ပို၍ သတိထားစေ ခငျြလို့ ညီမ အရှကျ အကှဲခံပွီး Sharing လုပျခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ …. ညီမလိုမြိုး ဘောငျးဘီအခှဲ ခံရတာ ညီမတို့ ရုံးမှာ ညီမ အပါအဝငျ နဲ့ဆို လေးယောကျမွောကျ ဖွဈပါတယျ …။
ညီမ ရုံးက အဈမ သုံးယောကျလဲ ရှဆေ့ငျ့ နောကျဆငျ့ အခှဲခံရတာ အဈမ တယောကျဆို အထဲက အတှငျးခံ ဘောငျးဘီထိ ပွဲပါတယျ (အသားမထိသှားတာပဲ တျောလှပွီ ပွောရမဲ့ ပုံပါ)
ဒီနရောမှာ ညီမ ပွောခငျြတာက ကိုယျ့အနားမှာ ကပျစီးတဲ့ ယောကျြားမှနျသမြှ ငယျငယျ ကွီးကွီး သတိထား ပါလို့ပဲ ပွောပါရစနေျော ….။
ညီမ မနကျ ရုံးသှားလို့ YBS (14) စီးတိုငျး ခါးပိုကျနှိုကျ နှိုကျသှားလို့ ဆိုပွီး ပွောကွ မွငျရတာရယျ ၊ ဆံပငျအရှညျကွီးကို အနောကျကနေ ဖွတျသှားလို့ဆိုပွီး ပွောကွ မွငျရတာရယျ မနညျးပါဘူး …။
နှိုကျတဲ့လူ ၊ ဖွတျတဲ့လူ လို့ သတိထားလိုကျ မိတဲ့ အခြိနျတိုငျး မမိလိုကျပဲ ဆငျးပွေးသှားတာ မနညျး ပါဘူး….. ကွားဖူး သိဖူးနတော ရယျကွောငျ့ မလှဲသာလို့ YBS (14) စီးနရေပမေဲ့ ကားလာတိုငျး တကျခါနီးတိုငျး ညီမ လိုရမယျရ ကားနံပါတျကွညျ့ပွီး မှတျပွီး တတျစီးလေ့ ရှိပါတယျ …။
ကံဆိုးခငျြတော့ ဒီနေ့ ကားနံပါတျလဲ မမှတျမိပဲ မိနဈ အနညျးငယျနောကျ ကနြတေယျ ဆိုပွီး အနောကျပေါကျ ကနပေဲ တကျစီးပါတယျ …။
(ဘာမှတော့ လုပျလို့ရမယျ မထငျပမေဲ့ CCTV ကို သှားကွညျ့ခငျြ ရငျတောငျ ကားနံပါတျ မမှတျမိတော့ ဆိုးတာပေါ့) ဖွဈခငျြတော့ ဘယျတုနျးကမှ ထညျ့လေ့ ထညျ့ထ မရှိတဲ့ မှတျပုံတငျရယျ ATM Card တှရေယျ Bank စာအုပျတှရေယျ ထညျ့လာပါတယျ …။(5ရကျနမှေ့ လခထုတျ ထာမို့ တခါထဲ ထုတျဖို့ ယူ လာခွငျးဖွဈပါတယျ)
ညီမ ပိုကျဆံအိတျက အလယျအလတျ ဆိုဒျမို့ စလှယျ လှယျလေ့ ရှိတာကွောငျ့ ရှပေို့ထားပွီး လကျတဈဖကျက ဖိကိုငျထား ပါတယျ နောကျတဈဖကျက တနျးကို ကိုငျထားပါတယျ၊ ဆံပငျကလဲ ခါးကြျော အရှညျကွီးကို စီးထားပွီး ဂြိုငျးကွားနဲ့ ညှပျပွီး ရှပေို့ထား ပါတယျ….. ထမငျးခြိုငျ့နဲ့ ထီးကတော့ ညီမရပျနတေဲ့ ခုံနားက ကလေးမလေး တဈယောကျ ကိုငျပေးထား ပါတယျ …။
ကားက အရမျး အကွပျကွီး မဟုတျပမေဲ့ မကွပျတဈကွပျ အနအေထား မြိုးပါ ညီမ အနားမှာ သတိထားကွညျ့နသေမြှ ယောကျြား ကွီးငယျ ရပျစီးနတော သတိထားမိ ပါတယျ …။
ပိုပွီး သတိထားမိ တာကတော့ ကြောကျကုနျး အကြျောလောကျမှာ ကားပျေါတကျလာတဲ့ မိနျးမက ခပျဝ၀ ညီမ ညာဘကျဘေးမှာ ရပျပါတယျ သူ့ယောကျြား ကတော့ အသားညိုညို မကျြမှနျနဲ့ အရပျမနိမျ့မမွငျ့ အသကျ ၄၀ စှနျးစှနျးလောကျ ရှိနိုငျပါတယျ ညီမခန်ဓာကိုယျနဲ့ အတငျးကပျပွီး အနောကျတညျ့တညျ့မှာ လာရပျပါတယျ …။
အသကျကွီးပွီး မထငျရလောကျတဲ့ လူကွီးက အတငျးတှေ ကွပျသယောငျနဲ့ တိုးနပွေီး ညီမ တငျပါးနားကို ကပျပွီး မထိတတိ လာလုပျနသေလို ဖွဈမိတာကွောငျ့ ရိပျမိမိခွငျး အောကျငုံ့ ကွညျ့တဲ့ အခါ ညီမ ခွထေောကျနောကျမှာ သူ့ခွထေောကျမို့ တကျနငျးပွီး ဘယျဘကျအတငျး တိုးထှကျ ပါတယျ (ဒီခြိနျထိ မထိတတိ လာလုပျနတော ကလှဲရငျ ဘောငျးဘီ ဖငျခှဲခံရမှနျး ညီမ မသိသေးပါဘူး)
ညီမဆငျးရမဲ့ တဈမှတျတိုငျ အလိုမှာ ညီမ ဆငျးတဲ့အပေါကျဝနားကို ထမငျးခြိုငျ့တှကေော ထီးတှကေော အ့လူကွီးကို အတငျး ကြျောယူပွီး အမွနျ ဆငျးပါတယျ …။(ဆငျးတဲ့အထိ သခေငျြးဇိုးကွီးက ညီမလှညျ့အကွညျ့အထိ ညီမကို မကျြစိ တဈဆုံး လိုကျကွညျ့ပါတယျ)
ရုံးရောကျတဲ့ အခါမှပဲ ရုံးက ညီမလေးတှေ အဈမတှေ ပွောတော့မှ “ဟယျ အနောကျမှာ ဘောငျးဘီက ပွဲနတောလား? ၊ အခှဲ ခံလိုကျရပွီလား?” ဆိုပွီး ၀ိုငျးကွညျ့တော့မှ အခှဲပါ ခံလိုကျရမှနျး သိပါတော့တယျ …။
ဒါတောငျ ဆငျးရတဲ့ မှတျတိုငျနဲ့ ရုံးနဲ့က မလှမျးမကမျးလေးမို့…. နို့မို့ဆို ကိုယျမသိတော့ အခွားသူတှေ မွငျရငျ တျောတျော ရှကျစရာကွီးရယျ …။
ညီမ သူငယျခငျြးကို ညီမ အဖွဈအပကျြကို ပွောပွတော့ ညီမသူငယျခငျြးက အ့လူကွီးနဲ့ အ့မိနျးမ ပုံစံကို ညီမ မပွောရသေးခငျ
” သူတို့ပုံစံကို ငါပွောပွမယျ လငျမယား နှဈယောကျလား ဘာလား ထငျရတဲ့ ယောကျြားက အသားညိုညို အရပျမနိမျ့မမွငျ့ မကျြမှနျနဲ့ ၊ မိနျးမက ခပျဝ၀ ” ညီမ ကွုံလာတဲ့ ထိုသူနှဈယောကျနဲ့ ကှကျတိပါပဲ YBS (14)မှာ သူဖွဈမလာခဲ့ ပမေဲ့ သတိထားမိနတော တှတေ့ာ နှဈခါ သုံးခါ ရှိပါပွီတဲ့ ထိုလူကွီးက မသင်ျကာစရာ မိနျးကလေးတှေ ကိုပဲ သတိထားပွီး အတငျး တှကွေညျ့ပါတယျ တဲ့လေ …။
ဒါဆိုရငျတော့ ခါးပိုကျနှိုကျလို့ ရရငျနှိုကျ ၊ နှိုကျလို့မရရငျ ဟိုလို မထိတဈထိတှေ လိုကျလုပျ ၊ မရတဲ့အဆုံး ဘောငျးဘီ ခှဲတယျပဲ ယူဆရ လောကျပါတယျ …။
ဒါကွောငျ့မို့ ညီမလို ညီမတို့ရုံးက အဈမတှလေို ထပျဖွဈမှာ ထပျကွုံမှာ မလိုလားလို့ ပို၍ ပို၍ သတိထားစခေငျြ ပါတယျ …။
ထိုလူကွီးကိုလဲ ကိုယျပွုသမြှတှရေဲ့ အကြိုးဆကျကို ဘဝဆကျတိုငျး ဘဝဆကျတိုငျး ခံစားရပါစလေို့ ကြိနျဆိုရငျး ……🙏
Love အတိုအစလေးမြား , source Gue FB
သက္ကမိုးညိုကို အမှုဖွင့်ရသည့်အကြောင်းအရင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ရှင်းလင်း…
မုဒိမ်းသမားတွေကို အပြစ်ရှိကြောင်း တရားစီရင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဓိက သက်သေ….